လူထု မောင်ကာဠု: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ၊ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အကျဉ်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ၊ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အကျဉ်း
ရေးသူ လူထု မောင်ကာဠု အချိန် 07:15
အမျိုးအစာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
Anonymous5August 2014 at 08:56
Anonymous5August 2014 at 14:25
အရက်သမား စွတ်ဖဲ့ [ခေတ္တ- တောကြိုအုံကြား]6August 2014 at 03:11
2015 - Goodbye U Thein Sein ……………………
Welcome မွတ်ဒေါင်းစုကြည် ……………………………
စံဇာဏီဘို6August 2014 at 07:28
သန်းရွှေမိသားစုကို ပြည်သူတွေက ကြိုးပေးသတ်ကြလိမ့်မည် ။
ကြိုင်ကြိုင် ကို လီးနဲ့ထိုး သတ်လိမ့်မည်
ကြိုင့်ကြိုင့် သမီးတွေကို အယ်လဇေးရှင်း နဲ့ မိတ်လိုက်ပေးပြီး သတ်ပစ်လိမ့်မည်
သူရ ရွှေမန်း အောင်သက်မန်း သူခိုးမိသားစုကို ဖင်လိုးသတ်ကြလိမ့်မည် ။
ကွယ်လွန်သူ ခွေးတိရစ္ဆာန် နေဝင်း ရဲ့ ခွေးမျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ အေးနေဝင်း ခွေးနေဝင်း လီးနေဝင်း တို့ကို မသေမချင်း ခွေးတွေနဲ့ ဖင်လိုးသတ်ခိုင်းလိမ့်မည် ။
ဒေါ်စု သမ္မတဧကန်မုချ ဖြစ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ် စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်သည် ။ ။ ။
[ စွတ် ဖဲ့ ]7August 2014 at 07:31
မှန်လိုက်လေ နောင်ကြီးရာ …………………………………
မျိုးဟန်ထွန်း @ကိုတိုး7August 2014 at 22:36
မြန်မာဆိုက်တွေ တော်တော်များများမှာ ရိုင်းစိုင်းနေတဲ့ စွတ်ဖဲ့ ဆိုတဲ့ကောင် ဘယ်နွားလဲ ဆိုတာ ဖော်ထုတ်သင့်တယ်
အဂ္ဂမဟာဒီမိုဖက်တီး ကို ဖင်လိုးသူ7August 2014 at 22:37
[ စွတ် ဖဲ့ ] 8 August 2014 at 02:58
လီးဟန်ထွန်း နဲ့ အပေါ်က ဖင်ခံသူ ………
စွတ်ဖဲ့ အမည်တမျိုးထဲဖြင့်သာ ရေးသည်
ဝနေဆွ (ခ) ဝဏ္ဏဆွေ (ခ) မာမီသံ9August 2014 at 10:44
သားတို့ သမီးတို့ ရေ …………
မာမီလေ …… facebook ပေါ်မှာ "I am မားသံ " ဆိုတဲ့ page နာမည်အသစ်လေးနဲ့ တကျော့ပြန် ချီးပေါက်နေတယ် ……………………………………
အရင် "မာမီသံ" ဆိုတဲ့ page က ဖျက်လိုက်ရတာ ကြာပြီလေ ……………
အခု လူတွေမေ့လောက်တဲ့ အချိန်ရောက်မှ တကျော့ပြန်လာပြီး နာမည်အသစ်နဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ချီးပေါက်တာလေ …………………
ခစ်ခစ်ခစ် ×376 ခါ
ဝနေဆွ (ခ) ဝဏ္ဏဆွေ (ခ) မာမီသံ9August 2014 at 22:03
မာမီနဲ့လိုးခဲ့ပြီး online ပေါ်မှာ ဖွခဲ့တဲ့ ပရစ်(prickley heat) ဆိုတဲ့ အပျက်မလေးလဲ အခုဆိုရင် သူမဟုတ်သလိုနဲ့ facebook ပေါ်မှာ အရှက်မရှိ ချီးပြန်ပေါက်နေပြီလေ ……………………
အဲဒီတော့ မာမီလဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ အရင်လိုပဲ facebook ပေါ်မှာ အာချောင်လို့ ရပြီလေ ……………
မျိုးဟန်ထွန်း @ကိုတိုး 11 August 2014 at 03:59
အိမ်မက်ဆုံရာ ဆိုတဲ့ စောက်ပေါအစီအစဉ်က မြင့်မိုးအောင် ဆိုတဲ့ နွားကို စောက်ခွက် လီးနဲ့ ထိုးမယ်
မျိုးဟန်ထွန်း @ကိုတိုး 11 August 2014 at 04:03
စောက်အရည်အချင်းမရှိပဲ ပေါ်ပင်လုပ် အနောက်သန်ပြီး အခြောက်ဆန်တဲ့အိမ်မက်ဆုံရာ စောက်ကဲပြိုင်ပွဲက ကောင်တွေကို စအိုခွဲပေးမယ်
နန့်ကြောတက်ထပြတဲ့ ကောင်မတွေကို လီးရည်တိုက်မယ်
Myo Han Htun @ Ko Toe 12 August 2014 at 03:39
ဂီတအစည်းအရုံးမှာ ဆရာမကြီးလုပ်နေတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဆိုတဲ့ ကျက်သမဲဖာသယ်မကို လီးနဲ့စောက်ခွက်ဖြတ်ရိုက်မယ် . သူကိုယ်တိုင်က copy သီချင်းတွေနဲ့လုပ်စားနေပြီး မူပိုင်ခွင့်တွေ ခိုးကူးတွေ ဘာညာ အသံကောင်းဟစ်နေတဲ့ ကလိန်ကကျစ်မ စောက်ခွက်သေးနဲ့ပန်းပြီး ရိုက်သတ်ပစ်မယ်
Myo Han Htun @ Ko Toe 12 August 2014 at 03:41
လမ်းဘေးခွေးလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ မြင့်မိုးအောင်ဆိုတဲ့ ကလိန်ကကျစ်ရဲ့ မိန်းမကို ဖင်လိုးသတ်မယ် . ကြောင်သူတော်လူယုတ်မာ
Myo Han Htun @ Ko Toe 12 August 2014 at 03:44
ထူးအိမ်သင်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာ ကျနော်မပါဘူး . ပြည်ပက အမျိုးသမီးအဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကို ခြင်ထောင်ထဲက အသံကြီးနဲ့ ပြန်ဆိုလို့ ။
သူက ဘယ်လိုလုပ် ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှု ပြုနိုင်မှာလဲ .
Myo Han Htun @ Ko Toe 13 August 2014 at 02:45
zaw55555 12 May 2015 at 20:57
ဗြိတိန်မှာလည်း သနားလို့ ဒုက္ခသည်ပေးထားတဲ့ ဧည့်သည်က အိမ်ရှင်ကို စော်ကား
By clicking on CONTINUE you confirm that you are 18 years and over ဗြိတိန်-ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွား လူငယ်တစ်စုဟုဖော်ပြထားသည့် ဂိုဏ်းတစ်ခုက ဗြိတိ...